सब्जी मण्डीकी ७६ वर्षीया ‘ठेलावाली’
पूजा परियार काठमाडौं, १४ साउन
तरकारीले भरिएका २ वटा ठेला, ठेलासँगै जोडिएको सानो खाटको लतरङ बिस्तरा, बिस्तरामाथि सिरानमा एउटा पुरानो रेडियो । हो, त्यही रेडियोले हरेक बिहान जगाउँछ ७६ वर्षीया पार्वती थापा अर्थात् ‘ठेलावाली आमै’लाई ।
काठमाडौंस्थित टोखा नगरपालिका– ११ बानियाँटार पुलमा रहेको तरकारी बजारमा बसेर उनले यसरी तरकारी बेच्न थालेको ७ वर्ष भइसकेको छ ।
आँखामा पावरवाला चस्मा, घाँटीमा डोरीमा झुण्ड्याइएको मोबाइल, छेवैमा दमको औषधि, मैलो बिस्तरा अनि त्यही बिस्तरामा बसेर करेला, भिन्डी, खुर्सानी, टमाटर, बन्दागोभी, फर्सी, कर्कलोलगायत सिजनअनुसारका तरकारी बेच्दै गरेको अवस्थामा उनलाई भेट्न सकिन्छ– बानियाँटार पुलमा रहेको सब्जी मन्डीमा ।
७६ वर्षको वृद्धावस्थामा तरकारी बेच्नु उनको रहर होइन, आफ्नो पेट आफैँ पाल्न गरेको सङ्घर्ष हो ।
४ छोरा र १ छोरीसहित ५ सन्तानकी आमा उनलाई यो उमेरमा यसरी सङ्घर्ष गर्नुपर्ला भनेर सोच्न त के कल्पनासम्म पनि कहिल्यै आएन । तर, जीवन सोचेको जस्तो कहाँ हुन्छ र !
१५ वर्षको कहिलो उमरेमा आमा बनेर सन्तानको जिम्मेवारी उठाएकी उनी साँच्चिकै जिम्मेवार र निडर छन् साथै आत्मविश्वस्त पनि । त्यसैले त अहिले साढे ७ दशक उमेर पार गरेर पनि आफ्नै सन्तानको बोझ बन्नुभन्दा आफ्ना लागि आफैँ गर्छु भनेर श्रम गरिरहेकी छन् ।
आफूले सोचेजस्तै सुखी अनि खुसी जीवन बिताउने हजारौँ सपना थिए पार्वतीका पनि । धादिङ माइती भएकी उनको ललितपुरको चापागाउँका लाहुरे रामबहादुर थापासँग विवाह भएको थियो ।
‘लाहुरे पोइ पाएर निकै खुसी थिएँ म । माइतीतिरका दिदीबहिनीहरू सबैले इष्रर्या गर्थे– इन्डियन आर्मीको दुलही बन्न पाई भन्दै तर मलाई भने त्यो इष्र्या पनि मज्जा लाग्थ्यो’, भर्खर विवाह भएको बेला सम्झँदै सुनाउँछिन् पार्वती ।
जब पहिलो सन्तानको जन्म भयो, त्यसलगत्तै श्रीमानले जागिर छाडे । जागिर गुमेपछि विस्तारै उनको घरपरिवारमा समस्याको भुमरी मडारिन थाल्यो । बिहान, बेलुकाको चुह्लो बाल्नसमेत गाह्रो पर्न थाल्यो । श्रीमान–श्रीमती दुवै मिलेर खेतीकिसानी गर्दासमेत मुस्किल भयो परिवार चलाउन ।
त्यसपछि उनीहरूले विस्तारै आफ्नो भएको जग्गाजमिन बेच्दै जीविका चलाउन थाले । यसबीचमा उनीहरूका ५ सन्तान भइसकेका थिए ।
तिनै सन्तान हुर्काउनकै लागि रातदिन एक बनाए, दुःख गरे । अर्मपर्म, ज्याला, मजदुरी सबै गरे । दुःख त गरै नै, भएको सम्पति पनि सके ।
बितेको दिन सम्झिँदै उनी भन्छिन्, ‘दुःख त त्यो बेला गर्नु गरियो तर छोराछोरीलाई राम्ररी पढाउन नसकेको अवस्थाले अहिले पनि मन चसक्क हुन्छ । पढ्न पा’को भए अहिले सबैको अवस्था राम्रो हुन्थ्यो, ठूला मान्छे पो बन्थे कि !’
उनका ४ वटा छोरामध्येको जेठो छोरा रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएका र उतै घरबार गरी बसेका छन् । ३ भाइ छोरा काठमाडौंमै छन्– एउटा ड्राइभर, एउटा किसान अनि अर्को ज्यामी काम गर्ने । एउटी छोरीको विवाह भइसकेको छ ।
सबै जना आआफ्नै ठाउँमा हाँसीखुसी, दुःखसुख गरेरै जीवन चलाइरहेका थिए । सबै खुसी थिए तर अचानक श्रीमानको मृत्यु भयो । त्यसपछि पार्वतीको जीवनमा उथलपुथल मच्चियो । सबै भएर पनि उनी एक्ली भइन् ।
‘१७ वर्षअघि बूढाले छाडेर गएपछि मैले झनै दुःख पाएँ’, भक्कानिँदै सुनाइन् उनले, ‘बरु एउटा सन्तान भएको भए त्यसैको जिम्मा हुन्थ्यो, ४ भाइ छन्, भएर के गर्नु, न यता भएँ न उता ।’
आमालाई कसले राख्ने, कहिलेसम्म राख्ने भन्ने कुरामा छोरा–बुहारीहरूबीच झैझगडा हुन थाल्यो । त्यसपछि आमा एक्लै बस्ने तर सहयोग सबैले गर्ने सहमति भयो ।
त्यसपछि बनिन् ‘ठेलावाली आमै’
एक्लै बस्ने भएपछि उनले सुरुका दिनमा बानियाँटार क्षेत्रका गल्लीगल्लीमा ठेला गुडाउँदै तरकारी बेच्दै हिँडिन् । उनको ठेलाको विशेषता साग र च्याउ थियो ।
‘टन्न साग राखेर ठेला गल्लीमा छिरेपछि घुइँचो नै लाग्थ्यो । कहिलेकाहीँ त धेरै मान्छे भएर पैसा नदिई साग लान्थे अनि भोलिपल्ट पैसा दिन्थे’। ठेलावाली आमै भन्छिन्, ‘तर, कसैले ठगेरचाहिँ खाएनन् है ! सबैको ठेलावाली आमै थिएँ नि त !’
ठेलावाली आमैलाई चुरोटको लत थियो । ठेलामा हुँदा होस् वा कोठामा बस्दा, उनलाई अम्मल खानै पथ्र्यो । साग बेचेको पैसा आफैँसँग हुने, त्यसैले दिनको २ प्याकेटसम्म खाने बताउँछिन् उनी ।
‘त्यही अम्मलले आज दम्मली बनायो । बितेका १० वर्षदेखि दमको रोगी छु’, आमै भन्छिन्, ‘औषधि पनि खाइरहेकी छु । चुरोट त अहँ छुँदै छुन्नँ ।’
दम रोगकै कारण उनी अहिले गल्लीगल्लीमा ठेला गुडाउन छाडेर तरकारी बजारमा २ वटा ठेलामा राखेर तरकारी बेच्दै आइरहेकी छन् ।
उनी पहिलेजस्तो हिँडडुल गर्नै सक्दिनन् अहिले । त्यसैले उनकै छोरा, छोरी, नातिनीहरूले बजारबाट तरकारी ल्याइदिन्छन् अनि बेच्छिन् उनी ।
एक पटक उनी लामो समयसम्म अस्पताल भर्ना हुने गरी बिरामी परिन् । कारण दम नै थियो । त्यसपछि धेरै पटक छोराहरूले आफूसँगै बस्न आग्रह गरे पनि । तर, उनलाई भने बस्न मन छैन ।
चर्को स्वर, झट्ट सुन्दा रिसाएको जस्तो सुनिने आफ्नो बोली, रोगी शरीर भएकाले पनि उनलाई सँगै बस्न मन नभएको बताउँछिन् ।
कुरैकुरामा उनले ‘कति पटक त यही ठेलामा तरकारी छान्दै गरेका ग्राहक तर्सेर भागेका छन् । त्यसपछि कहिल्यै मेरोमा तरकारी किन्नै आएनन् । तरकारी बजार आए भने पनि पारिपारितिर हेरेर हिँड्छन् । एक्कासि दम बढेर त्यो बेला चर्को बोलेछु । अहिले घाटा भा’छ’ भनिन् ।
अहिले उनलाई हप्ताको २ पटक त दमको औषधि मात्र किन्नुपर्छ । त्यसकै लागि भए पनि तरकारी त बेच्नै पर्ने बाध्यता भएको उनको भनाइ छ । हिँडडुल गर्न नसक्ने भएपछि उनले काठमाडौंको कठ्याङ्ग्रिने हिउँददेखि भतभती पोल्ने गर्मी याममा पसिना चुहाउँदै त्यही तरकारी बजारको आफ्नै ठेलामा दिनरात काट्दै आएकी छन् ।
बिहान कान्छी बुहारीले खाना ल्याइदिने अनि बेलुका बजार वरिपरि नै जे हल्काफुल्का पाइन्छ, त्यही खाएर सुत्ने गर्छिन् ।
कोभिड– १९ को त्रासका कारण भएको लकडाउनमा पनि उनले तरकारी बजारमै दिनरात बिताइन् । पहिले त्यहाँ बसे पनि तरकारी बेचेर राम्रै कमाइ हुने भएकाले उनलाई खासै पीर थिएन तर अहिले भने उनको पीरको सीमा छैन ।
उनी भन्छिन्, ‘ज्यान हाइसन्चो भ’को भए ठेला डुलाउँदा नै कमाइ राम्रो हुन्थ्यो, अहिले यो केके जाति रोगले त झन् जहाजै डुबायो ।’
सब्जी मन्डीमा एउटा ठेलाको एक महिनाको भाडा १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । उनका २ वटा ठेला छन् । चैतदेखि असार महिनासम्मको भाडा उनले तिर्न सकेकी छैनन् । लकडाउनका कारण उनको व्यापार छैन, न ठेलामा राम्रा तरकारी नै ।
अहिले लकडाउन त खुला भयो तर ग्राहक छैनन्, व्यापार छैन । छोराछोरीलाई भन्ने ठाउँ पनि छैन किनकि यो बेला सबै बेरोजगार जस्तै भएका छन् । पालैपाले अहिले परिवारका सदस्यहरूको दिन पनि त्यही ठेलामै बसेर बित्ने गरेको छ ।
भण्डै ४ बीसा वसन्त र शिशिर भोगेकी पार्वती अर्थात् ‘ठेलावाली आमै’ले नाति, पनातिसमेत देखिसकेकी छन् । जिन्दगीका विविध उतारचढाव र आरोह अवरोह पनि उनले पचाइसकेकी छन् । ‘लाहुरेनी’देखि ‘ठेलावाली’सम्म भोगिसकेकी उनलाई अब रोगैरोगले थलिएर अस्पतालमा भर्ना भएर होइन, तरकारी बेच्दाबेच्दै ठेलामै जिन्दगीको विश्राम लिन मन छ ।
भन्छिन्, ‘पछिल्लो समय मलाई यही ठेलाले जीवन दिएको छ, यसमै प्राण छाड्न मन छ ।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, १४ साउन २०७७, ०७:३५:००
आसन सिद्धिका विधिहरू
जंगबहादुरका सन्तानको कथा
ठेलाको सहारामा बाँचेकी एउटी ‘अनागरिक’ नेपाली
शिक्षकसँगको त्यो रात !
प्रिय पुरुष ! बिहे नगरी स्वतन्त्र बाँच्ने कि
आमामाथि रिभल्बर ताक्दा...